Interview ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြေမလဲ? - JobExpress Myanmar
Covid 19ကာလကြီး ပြီးဆုံးသွားရင် Companyအများစုက ထွက်သွားတဲ့ နေရာလွတ်တွေအတွက် အပြိုင်အဆိုင် အလုပ်တွေ ခေါ်တော့မှာပါ။ အလုပ်ရှာတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကလဲများနေမှာ ကြိမ်းသေပါပဲ။ အဲ့တော့ အပြိုင်အဆိုင်များမယ့် Covid 19အပြီးကာလမှာ Interview ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြေမလဲ?
Interview စပြီဆိုတာနဲ့ အများစုက ဘာမှမေးစရာမလိုအောင် အကုန်ဖြေလိုက်ကျတယ်။ Interviewerကလဲ “ဟုတ်ပြီ ပြန်ဆက်သွယ်မယ်” လို့ပြောပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ပါလေရော။ ဒါဟာ လုံး၀မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အဲ့တော့
Introဖြေတဲ့အခါမှာ ဘယ်တော့မှ “သုံးမိနစ်” ထက်မပိုပဲ လိုရင်းတိုရှင်းပြောစေချင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ Future employerနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ကိုယ့်ဖက်စပြီး ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အပြုံးရဲ့ စွမ်းအား ဘယ်‌လောက်ကြီးတယ် ဆိုတာတော့ အများကြီးပြော စရာမလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ်။
အဲ့လိုအပြန်အလှန်နှူတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Interviewစပြီပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ Interviewer ဖက်ကစပြီး “မင်းရဲ့ အကြောင်းလေးပြောပြပါဦး”လို့ မေးတတ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူရဲ့ Company အကြောင်းနဲ့ ရှာနေတဲ့ Positionအကြောင်းကို ရှင်းပြတတ်ကျပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ကို စမေးလာခဲ့မယ် ဆိုရင်‌‌ရော ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ ဘယ်လိုဖြေမယ် မပြောခင် ကျွန်တော်အရင်က သုံးနှစ်လောက် Recruiter အတွေ့အကြုံပြောပြရမယ်ဆိုရင် တချို့က ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတွေ ပြန်ဖြေကြပါတယ်။ နေရပ်မြို့၊ အထက်တန်းကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ လာဖြေတဲ့ အလုပ်နဲ့ မဆိုင်တာတွေ ကနေစပြီး ပြောကျတော့တာပါပဲ။ Interviewerက ဒါတွေ မကြားချင်ပါဘူး။ သူရှာနေတဲ့ Positionနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Experiencesတွေ အကြောင်းကို အဓိက ကြားချင်တာပါ။ အဲ့တော့ ဘာတွေပြောသင့်လဲဆိုတော့ …
ဘယ်လို Industryမျိုးတွေမှာ လုပ်ဖူးခဲ့တယ်
ဒီအချက်တွေကို လိုရင်းတိုရှင်းနဲ့ ပြောစေချင်ပါတယ်။
Introမှာ Interviewerကို ကိုယ့်အပေါ် ပိုစိတ်၀င်စားသွား‌စေဖို့ Achievement တစ်ခုလောက်တော့ ပြောပြရပါလိမ့်မယ်။ အရင်လုပ်မှာ “Best Biller of the Month”, “Reduce 20% of Project Costs” ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဒါနဲ့အတူ ဘာလို့ ဒီ Companyနဲ့ Positionကို စိတ်၀င်စားကြောင်းပါ ပြောလိုက်ပါ။
ကိုယ်ရဲ့ အကြောင်းတွေကို အကြမ်းဖျင်းပြောပြပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Interviewer ဖက်မှာ မေးစရာလေးတွေရှိနေပါပြီ။ အဲ့တော့ သူရှေ့မှာကိုယ်ပြောခဲ့တဲ့Experiencesတွေ၊Achievements တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ပြန်ပြီးမေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အလွယ်တကူပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ “ငါတို့အလုပ်မှာကတော့ ဒီလိုမျိုး လုပ်ရမှာတွေရှိတယ် လုပ်နိုင်လား”လို့မေးရင် သေချာပြန်ဖြေဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ သတိထားရမှာက Back & Forth Conversation ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ Interviewerကို 65% ပြောစေပြီး ကိုယ်က 35% ပြောဖို့ကို Recommend လုပ်ချင်ပါတယ်။ If you talk much, you lose.
Interviewerက အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နိုင်လားလို့ မေးတဲ့အခါမှာ “လုပ်နိုင်ပါတယ်” လို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ Similar experienceတစ်ခုနဲ့ စသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ အဲ့ဒီ Similar Experienceမှာ အခက်ခဲ (Issues)လေးတွေရှိခဲ့ရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့တယ် ဆိုတာကိုပါ တစ်ခါတည်း ထည့်ပြောပါ။ ပြီးရင်တော့ ဒီအလုပ်မှာရော Issues ရှိလာနိုင်လား၊ ရှိနိုင်ရင်လည်း ဘယ်လိုဖြေရှင်းနေလဲ ဆိုတာကိုပါ ထည့်ဆွေး‌နွေးသင့်ပါတယ်။ ဒီသဘောက သူမှာရှိတဲ့ Issuesတွေတွက် ကိုယ်က တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေ ဝင်ပြီး ဆွေးနွေးပေးရာရောက်ပါတယ်။ အကယ်လို့ သင့်ရဲ့ အမြင်အယူအဆက ကောင်းခဲ့ရင် Interviewerအနေနဲ့ Impress ဖြစ်မှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီ Q&A section မှာတော့ 30min~40min လောက် discuss လုပ်စေချင် ပါတယ်။
Interviewer သိချင်တာတွေလဲ ကုန်ပြီဆိုရင်တော့ အဆုံးသတ်အနေနဲ့ “ဘာမေးစရာ ရှိဦးမလဲ” လို့ သင့်ကိုမေးကောင်း မေးနိုင်ပါတယ်။ အခုက First Interview သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါတွေကို လုံးဝမမေးစေချင်ပါဘူး။
Arrive Late or Early
Q&A မှာ မရှင်းတာတွေကို ပြန်မေးလို့ ရသလို ကိုယ့်ကို Interview တဲ့ Position, Department နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲ မေးလို့ရပါတယ်။ ဘယ်တော့၊ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့များ Interview Feedback ကြားနိုင်မလဲလို့မေးခဲ့ပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် ဆက်ရေးပေးပါမယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် Interview အပြီးသတ်ပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့်လဲ မလုံလောက်သေးပါဘူး။ အရေးအကြီးဆုံး တစ်ခုကျန်ပါသေးတယ်။ Q&A Sectionမှာ Interviewerကဘယ်လိုအရည်အချင်းရှိတဲ့သူကို လိုချင်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေထဲက သင်အကျွမ်းကျင်ဆုံး အချက် (၃)ချက်လောက်ကို ပြန်ပြီး Summary လုပ်စေချင်ပါတယ်။
ဥပမာ – အကိုခုနကပြောသွားတဲ့ထဲက “Data Analysis, SEO, Strategic ပိုင်နိုင်တဲ့ သူမျိုးရှာနေတာဆိုရင်၊ ကျွန်တော် အဲ့ဒီအပိုင်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လုံး၀ ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအလုပ်နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး လုံး၀ ယုံကြည်မှု ရှိပါတယ်”လို့ အဆုံးသတ်ပြီးရင်တော့ လက်တွဲနှုတ်ဆက်လို့ ရပါပြီဗျာ။
Content By Ko Min Thet Lwin